(၄၈)နာရီအတွင်း အပူဆုံးကနေ အအေးဆုံး ရာသီဥတုကို ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ Colorado ပြည်နယ် - TGI Daily News
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အစကတည်းက လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ California ပြည်နယ်က တောမီးကိုတော့ လူတိုင်း သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ အဆိုပါတောမီးကြောင့် ဧကသန်းပေါင်းများစွာ လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိပြီး လူနေအိမ်တွေကို မကူးစက်ဖို့အတွက် မီးသတ်သမားတွေလည်း အင်နဲ့အားနဲ့ ငြိမ်းသတ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရှိန်အဟုန်ပြင်းတဲ့ တောမီးဟာ အခုအချိန်အထိကို တောက်လျှောက်လောင်ကျွမ်းလျက် ရှိပါသေးတယ်။ အခုလည်း California ပြည်နယ်နဲ့ အနီးဆုံး Colorado ပြည်နယ်ဟာဆိုရင်လည်း ၄၈ နာရီအတွင်း အပူဆုံးရာသီဥတုကနေ အအေးဆုံး ရာသီဥတုကို ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း Bored Panda သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။
Colorado ပြည်နယ်ဟာ California ပြည်နယ်နဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်ပြီး California ပြည်နယ်က လောင်တဲ့ တောမီးနဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် အပူချိန် ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ ပူလောင်လွန်းလှတဲ့ ရာသီဥတုအောက်မှာ နေနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအပူအချိန်ဟာ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိပဲ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ အပူချိန်က တောက်လျှောက်ထိုးကျခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ မနက်ခင်းမှာတော့ Colorado ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းမှာ နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။
နှင်းတွေဟာ အခုအချိန်အထိကို ကျဆင်းနေပြီး ရေခဲထုဟာ ၄ လက်မနီးပါးအထိကို မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ Colorado ပြည်နယ်သားတွေခမျာမှာတော့ ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အံ့သြသင့်ခဲ့ကြပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ပုံတွေ အလုအယက်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူတော်တော်များများကလည်း အဆိုပါပုံတွေကြောင့် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ ရာသီဥတုအပေါ် အံ့သြသင့်ခဲ့ကြပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေတောင် ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
“အမှန်တစ်ကယ်တော့ ရာသီဥတုက စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်တဲ့ သဘောပါ။ အရမ်းပူနေတဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရက် အေးသွားတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အပူချိန်အရမ်းမြင့်တဲ့ အချိန်မှာ လေဖိအားကြောင့် ရုတ်တရက် လေအေးတွေ ဝင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အပူမရှပ်အောင်သာနေဖို့ ဂရုစိုက်ကြပါ။ တက်နိုင်သမျှအိမ်ထဲမှာပဲ နေကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ”လို့ Colorado Climate Center မှ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ Russ Schumacher က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
(၄၈)နာရီအတှငျး အပူဆုံးကနေ အအေးဆုံး ရာသီဥတုကို ပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ Colorado ပွညျနယျ
၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ အစကတညျးက လောငျကြှမျးနတေဲ့ California ပွညျနယျက တောမီးကိုတော့ လူတိုငျး သိကွပွီး ဖွဈမှာပါ။ လကျရှိအခြိနျမှာ အဆိုပါတောမီးကွောငျ့ ဧကသနျးပေါငျးမြားစှာ လောငျကြှမျးလကျြရှိပွီး လူနအေိမျတှကေို မကူးစကျဖို့အတှကျ မီးသတျသမားတှလေညျး အငျနဲ့အားနဲ့ ငွိမျးသတျလကျြရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အရှိနျအဟုနျပွငျးတဲ့ တောမီးဟာ အခုအခြိနျအထိကို တောကျလြှောကျလောငျကြှမျးလကျြ ရှိပါသေးတယျ။ အခုလညျး California ပွညျနယျနဲ့ အနီးဆုံး Colorado ပွညျနယျဟာဆိုရငျလညျး ၄၈ နာရီအတှငျး အပူဆုံးရာသီဥတုကနေ အအေးဆုံး ရာသီဥတုကို ပွောငျးလဲခဲ့ကွောငျး Bored Panda သတငျးဌာနရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ သိရှိရပါတယျ။
One day it's 37 C (99 F) with falling ash from nearby fires, the next it's snowing. Autumn lasted3hours. #colorado pic.twitter.com/2JqNiWhhAB
— Bonnie Etherington (@anak_kobakma) September 9, 2020
Colorado ပွညျနယျဟာ California ပွညျနယျနဲ့ အနီးဆုံးဖွဈပွီး California ပွညျနယျက လောငျတဲ့ တောမီးနဲ့ ရာသီဥတုအခွအေနကွေောငျ့ အပူခြိနျ ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျအထိ ပူလောငျလှနျးလှတဲ့ ရာသီဥတုအောကျမှာ နနေရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီအပူအခြိနျဟာ စကျတငျဘာလ ၆ ရကျနအေ့ထိပဲ ဖွဈခဲ့တာပါ။ စကျတငျဘာလ ၇ ရကျနမှေ့ာ အပူခြိနျက တောကျလြှောကျထိုးကခြဲ့ပွီး စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ မနကျခငျးမှာတော့ Colorado ပွညျနယျတဈဝှမျးမှာ နှငျးတှဖေုံးလှမျးနခေဲ့ပါတယျ။
နှငျးတှဟော အခုအခြိနျအထိကို ကဆြငျးနပွေီး ရခေဲထုဟာ ၄ လကျမနီးပါးအထိကို မွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ Colorado ပွညျနယျသားတှခေမြာမှာတော့ ရုတျခညျြးပွောငျးလဲသှားတဲ့ ရာသီဥတုကွောငျ့ အံ့သွသငျ့ခဲ့ကွပွီး ဓာတျပုံတှရေိုကျကာ ဆိုရှယျမီဒီယာတှမှော ပုံတှေ အလုအယကျတငျခဲ့ကွပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားကလညျး အဆိုပါပုံတှကွေောငျ့ ရုတျခညျြးပွောငျးလဲသှားတဲ့ ရာသီဥတုအပျေါ အံ့သွသငျ့ခဲ့ကွပွီး စိုးရိမျစိတျတှတေောငျ ဝငျခဲ့ကွပါတယျ။
“အမှနျတဈကယျတော့ ရာသီဥတုက စိုးရိမျစရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတတျတဲ့ သဘောပါ။ အရမျးပူနတေဲ့အခြိနျမှာ ရုတျတရကျ အေးသှားတာမြိုးတှေ ရှိတတျပါတယျ။ အဓိကကတော့ အပူခြိနျအရမျးမွငျ့တဲ့ အခြိနျမှာ လဖေိအားကွောငျ့ ရုတျတရကျ လအေေးတှေ ဝငျလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ အပူမရှပျအောငျသာနဖေို့ ဂရုစိုကျကွပါ။ တကျနိုငျသမြှအိမျထဲမှာပဲ နကွေတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ”လို့ Colorado Climate Center မှ ဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈသူ Russ Schumacher က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၂ ရက်ဆက်တိုက်မိုးရွာသွန်းပြီး သက်တမ်း ၁၁၇ နှစ်ရှိရှေးဟောင်းရေတွင်း မြေပြို၍ ၄ မီတာ တွင်းနက်ကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့